Maalinta: Sebtember 26, 2017
Sami Aydın, Duqa Magaalada Sivas, wuxuu si weyn u bixiyaa fiiro gaar ah si uu u qiimeeyo ugana tashto adeegyada ay bixiyaan iyadoo lala kulmayo dhammaan qaybaha bulshada fursad kasta oo uu helo. Marka tan la eego, xisbiga AK Party oo leh ururka gobolka [More ...]
Istanbul Line Nostalgic Tram Line 2 in la furo inta lagu jiro bisha
Mashruuca tram-ka 2, oo ka socda dhismaha Waddada Istanbul, oo ay maamusho Dawladda Hoose ee Düzce, ayaa la furi doonaa bisha. Wejigii labaad ee mashruuca socodsiinta socodsiinta dadka ee bartamaha magaalada oo uu bilaabay degmada Düzce ayaa la soo gabagabeeyey. [More ...]
U fudud weyn ardayda ku jirta gaadiidka
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sanliurfa, ardayda iyo macallimiinta ayaa bilaabay iyagoo ku daray codsiyada kaarka cusub ee Urfa iyo codsiyada fiisaha inta lagu gudajiro howlaha codsiyada fiisaha iyagoo meesha ka saaraysa dalabka Qaranka. [More ...]
Ku qanacsanaanta muwaadiniinta gaadiidka dadweynaha
Fatih Pistil wuxuu sheegay in tababarada kor u qaadaya qanacsanaanta muwaadiniinta ee gaadiidka dadweynaha ay sii socdaan iyo in shaqooyinka ay u sii socon doonaan si aan kala go 'lahayn gaadiid nabadgelyo iyo dhoola cadeyn leh. Ku qanacsanaanta shacabka ee gaadiidka dadweynaha ee Sakarya Magaalo-weyne [More ...]
Dib-u-habeynta Lacagaha Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Xarunta Iskuxirka Iskuxirka Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Kayseri (UKOME), ayaa kulan la yeeshay si looga wada hadlo qiimaha tikidhada gaadiidka dadweynaha. Jadwalka safarka gaadiidka dadweynaha ee kulanka 24 Sebtember 2017 [More ...]
Matxafka TCDD waxaa lagu dhisi doonaa Cankiri
Duqa Magaalada İankırı İrfan Dinç wuxuu la kulmay ku dhawaad ​​boqol shaqaale howlgab ah oo ka shaqeeya heerar kala duwan oo TCDD ah gudaha Çankırı. In kulanka; ku biirinta shaqaalaha tareenka ee iyagu door muhiim ah ku leh taariikhda dhowaan magaalada. [More ...]
Anel Electric wuxuu calaamad u yahay mashruuca tareenka ee Qatar
Shirkadda hoos timaadda Anel Elektrik ee Qatar waxay saxiixday warqad ula-jeed ah Fujita qaddarka $ 43.7 milyan. Dayactirka iyo hawl galada ANEL MEP, waa shirkad laga leeyahay Anel Elektrik, waa laan ay leedahay shirkadda Fujita Corporation ee Qatar iyadoo qayb ka ah mashruuca iskuxirka tareenka ee Qadar. [More ...]
Gaadiidka gawaarida ee gaadiidka dadweynaha ee Shirinyer Park
Dawladda Hoose ee Magaalada İzmir, Şirinyer Park, oo ku taal bartamaha Buca, oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn magaalada, ayaa dhowaan loo beddeli doonaa waji cusub. Sida laga soo xigtay mashruuca, 69 acre park, oo laga badbaadin doono dhismaha degdega ah ee dusha sare ku yaal, ayaa leh muuqaal casri ah. [More ...]
Dowladda Hoose ee Nusaybin waxay mashruuc kale oo ballaaran ka waddaa Mashruuca Dhaqancelinta ee Nusaybin. Mashruucan, garoonka tareenka ee degmada waa la nadiifiyaa iyo nooc kasta oo waxyeelo u geysta caafimaadka aadanaha iyo deegaanka iyadoo wasakheysa muuqaalka. [More ...]
Badhasaabka Badhtamaha Badem ayaa booqday Koçbay
Duqa Magaalada Odemis A.Mahmut Badem, TCDD Izmir 3. Agaasimaha Gobolka Selim Koçbay'ı ayaa booqday xafiiskiisa. Duqa magaalada Mdemiş A.Mahmut Badem ayaa wadahadalo kula yeeshay Agaasimeyaasha gobolka İzmir ee ku saabsan mashaariicda laga fulin doono degmada. Ödemiş ee [More ...]
Tareenka Samsunspor wuxuu joojiyaa dhamaadka farxadda
Nidaamka tareenka fudud ee Samsun SAMULAŞ ee joogsiga dhacdada naxdinta leh ee Zamunspor waxay kor u qaaddaa iyada oo loo ballan qaaday dhammaad farxad leh. Samsun aad bay ugu horumartay dhanka gaadiidka, halka naafada iyo caruurta leh muwaadiniin si aad ah uga fikiraya [More ...]
Isgoysyada Tareenka waxay ka shaqeeyaan Sivas
Guddoomiyaha Sivas Davut Gül, Duqa Sami Aydın iyo TCDD Sivas 4 Maareeyaha Gobolka Hacı Ahmet Şener ayaa dhammeystiray howlihii xad dhaafka ahaa ee isku xiri doona Muhsin Yazıcıoğlu Boulevard iyo garoonka ku yaal Sivas. [More ...]
80 Tallaabada Sanadka ee Izmir Bay
Mashruuca dib-u-warshadaynta dabiiciga ee ugu weyn adduunka oo ay fulinayso Magaalada Izmir Magaalo-Weyne ayaa ka bilaabanaysa Izmir Bay. Marka mashruuca baxnaaninta İzmir Izmir Bay iyo Harbor la dhammeeyo, 80 bay waxaa lagu soo celin doonaa sanadka ka hor [More ...]
Mashruuca dawladda hoose ee Magaalada Ankara ee '3 projectraal monorail', kaas oo loo qorsheeyay in lagu dhiso moodel la yiraahdo "Work-Transfer-Transfer model", ayaa horseeday shirkadaha inay dalbadaan dammaanad qaad rakaab. Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn Bilkent iyo Isbitaalka Magaalada Etlik, oo dhawaan la furi doono [More ...]